လုံခြုံတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ Mac ကိုဘယ်လို boot လုပ်မလဲ ငါက Mac ပါ
Troubleshooting အတွက်သင်၏ Mac ကို Safe Mode ဖြင့် Boot လုပ်နည်း
Jordi Gimenez | | Mac OS X ကို, Mac ကွန်ပျူတာများ, လဲ tutorial
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုစတင်ရန်နှင့်ပြrunningနာတစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်နိုင်သည့်ဆော့ဝဲလ်ပြproblemsနာများကိုစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Safe Boot သို့မဟုတ် Safe Mode ။
ဤလုပ်ငန်းကိုထမ်းဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုစတင်ချိန်တွင်အဆင့်အနည်းငယ်ကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးနေပုံရသော်လည်း၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ Mac ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့်စတင်နိုင်ရန်အတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အဆင့်ဆင့်ကိုတစ် ဦး ချင်းစီမြင်တွေ့ရမည် ပြaနာရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အမှားကိုပြင်ပါ.
2 Safe Mode သို့ဝင်ပါ
လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ Mac စတင်သောအခါပထမ ဦး ဆုံးအရာသည် startup disk ကိုစစ်ဆေးပြီး directory ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ Mac ကိုဤနည်းဖြင့်စတင်သောအခါစက်သည်အခြေခံ kernel extensions များကိုသာ load လုပ်သည်၊ ငါတို့ Mac ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ထားသော fonts များကိုပိတ်ထားသည်။ boot နှင့် starting session တွင် boot ပစ္စည်းများနှင့် login ပစ္စည်းများမဖွင့်ပါ။
OS X 10.4 အရ /Library/Caches/com.apple.ATS/ တွင်သိုလှောင်ထားသောဖောင့် cache များကိုဟုတ်တယ်/ အမှိုက်ပုံး (ဘယ်မှာ) သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည် ဟုတ်တယ် OS X v10.3.9 (သို့) အစောပိုင်းဗားရှင်းများတွင် Apple မှထည့်သွင်းထားသော boot ပစ္စည်းများသာလုံခြုံစိတ်ချရသော mode ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ဤအရာများကိုများသောအားဖြင့် / Library / StartupItems တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤအရာများသည်အသုံးပြုသူမှရွေးချယ်ထားသောအကောင့်ဝင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ကွဲပြားသည်။
Safe Mode သို့ဝင်ပါ
safe mode boot process သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အဓိကဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mac ကိုပိတ်ပါ။ Mac ပိတ်ထားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်နိုင်သည် ရဲ့ Mac ကို reboot ကြကုန်အံ့.
Mac နဲ့အချိန်လေးကို boot လုပ်နေချိန်မှာ ထူးခြားသော startup အသံကိုကြားပြီးနောက် Shift ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီ pulsation က start-up အသံထွက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ကျွန်တော်လုပ်ရင်အဲဒါအလုပ်မလုပ်ခင်။ Apple လိုဂိုပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျနော်တို့နှိပ်ရပ်တန့်။
ဤဖြစ်စဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသည်နှင့်ပုံမှန်ဖြစ်သည် home screen ကိုဖွင့်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ပိုလိုတယ်စိတ်ဓာတ်မကျပါနှင့်၊ စိတ်ချရသည်းမခံပါနှင့်။ စက်သည်လုံခြုံမှုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လမ်းညွှန်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုကြာရှည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လုံခြုံစိတ်ချရသော mode ၌ရှိနေစဉ်နှင့်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ရရှိနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ ကျွန်တော်ဒီဗီဒီဖွင့်စက်ကိုသုံးလို့မရဘူး, သင်ဖြစ်စေမရနိုင်ပါ iMovie ဖြင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အသံသွင်းခြင်း (သို့) ထုတ်ကုန်များကိုသုံးပါ.
ဆက်သွယ်မှု USB၊ FireWire နှင့် Thunderbolt မရနိုင်ပါ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ mode ၌ရှိကြ၏သောအခါအလုပ်မလုပ်ကြောင်း Wi-Fi ကွန်ယက်များကန့်သတ်ထားနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သုံးနေသော Mac နှင့် OS X ၏မူကွဲပေါ် မူတည်၍ မရရှိနိုင်ပါ။ ပိတ်ထားသည် ဂရပ်ဖစ်ဟာ့ဒ်ဝဲအရှိန်အဟုန်မြင့်မားမှု၊ OS X မီနူးဘားသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရှိပြီးဖိုင်ဝေမျှခြင်းကိုပိတ်ထားသည်။
ပြbootနာပြေလည်သွားပြီ (သို့) safe boot မှရှာဖွေတွေ့ရှိသောပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးသည်နှင့်စက်ကိုပုံမှန် boot ဖြင့်ပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။ ဒီအတွက်ငါတို့သာလုပ်ရမယ် မည်သည့်သော့ကိုမျှမနှိပ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကို restart လုပ်ပါ။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်ကီးဘုတ်ကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်သင် Terminal ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် အဝေးမှသို့မဟုတ် SSH သုံး၍ အခြားကွန်ပျူတာတစ်ခုမှကွန်ပျူတာထဲသို့ logging လုပ်ခြင်း၊ သို့သော်၎င်းသည်အခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Troubleshooting အတွက်သင်၏ Mac ကို Safe Mode ဖြင့် Boot လုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျားပြောတဲ့သော့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမင်းသိတယ်၊ ငါမှာ Yosemite ရှိတယ်၊ နောက်ဆုံးတစ်ခု၊ ဘားရဲ့အလယ်မှာဒီထက်နည်းနေတယ်၊ ​​နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
ပြင်သစ် Javier RAMIREZ YEBENES ဟုသူကပြောသည်
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ YEBENES သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ဒီကြိုးစားမှုအတွက်ငါအညိုရောင်ရှုပ်ထွေးမှုကိုရလိုက်တယ်၊ ငါဟာစဖွင့်စရာမလိုဘဲကျန်ခဲ့ပြီးဘုရားသခင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကြီးပြီး Mac ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရာမှာအထောက်အကူပြုတယ်။ ငါစက်ဝိုင်း၏အမှတ်အသားကိုအလယ်တွင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြင့်အမှတ်မထင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်အစပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဘာတစ်ခုမျှမလုပ်ခဲ့ပါ၊ ထိုတွင်ရှိနေခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အချိန်ရှိသောစက်၏မိတ္တူကိုသာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် OSX ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအခန်းကဏ္ worked မှသာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ Downloads ဖိုင်တွဲကိုယခုဒေါင်းလုပ်လို့ခေါ်တယ်၊ ငါနာမည်ပြောင်းဖို့ကြက်ဥမရှိတော့ဘူး၊ ဒါကမိုက်မဲတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကိုငါကြိုးစားပြီးကွန်ပျူတာ ၂ လုံးနီးပါးလောက်အကုန်အသုံးမပြုတော့တာကိုငါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ မလုပ်ဘူး ...
မင်္ဂလာပါ shiryu222, လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုခုကသင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမျိုးအစား၏သင်ခန်းစာကိုလုပ်သောအခါ၎င်းသည်ပြproblemနာမရှိကြောင်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ့အမှု၌ iMac ပြnoနာမရှိပါ၊ စက်ကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်းသည်ပြproblemနာမရှိဘဲစတင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ imac တွင်ကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ် snitch ကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းသည် installation ၏အလယ်တွင်ပြန်လည်စတင်သည်။ dps သည်အလုပ်မလုပ်ဟန်တူသော်လည်းအချိန်တိုအတွင်းဆက်သွယ်မှုအားလုံးပြတ်တောက်သွားသည်၊ bluetoth, usbe, internet၊ အရာအားလုံး၊ အဲဒီကနေစပြီးငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ပိုဆိုးသွားတယ်၊ ငါဟာ mouse (သို့) ကီးဘုတ်မရှိခဲ့ဘူး (အဲဒါဟာအကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူး၊ ငါစိတ်ရှည်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်!) အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီး၊ ထိုစက်ကိုလက်ခံပြီးသော့သည် "utility of disk » command + r ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင်ကျွန်ုပ်သည် disk ကိုပြန်လည်စစ်ဆေး။ ပြုပြင်ခဲ့သော်လည်းအမှားလုပ်မိသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်စက်သည်မဖွင့်နိုင်သေးပါကဖွင့ ်၍ ဖွင့်နိုင်သည်။ disk utility mode နှင့်ထိုအရပ်မှ HD အင်တာနက်ကို yosemite x ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားပုံရသည်၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ငါကအပူတပြင်းပါပဲ။ ငါငါ့ရဲ့ utility files တွေကိုတောင် backup လုပ်လို့မရဘူး။ လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်သို့ဝင်ရောက်ရန်အခြားနည်းလမ်းရှိပါသလား။ “ uppercase” key ကသော့ဟာငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချဲ့ထွင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဖိုရမ်တွေအကြောင်းသိပ်မသိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ကောင်းပြီ၊ နည်းနည်းလေးစုံစမ်းစစ်ဆေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် third-party ပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့်ချုံ့ထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းမဟုတ်သည့် ssd ရှိ၍ ၎င်းသည် kext လက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုသက်ဝင်စေပြီး၎င်းကိုစတင်သောအခါ disk ကိုခွင့်မပြုပါ။ စာဖတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတည်ပြုနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ အကယ်၍ ၎င်းကိုအခြားပို့စ်တွင်သို့မဟုတ်ဤစာစောင်တွင်ဖော်ပြပါက၎င်းကိုပြုပြင်ခြင်းမပြုမီဤအရာကိုမလုပ်ဆောင်မီတိထားသည့်လူများက၎င်းအားရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်လျှင်ကောင်းလိမ့်မည်။ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဘေးဆိုးများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Mac တွင်အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အမှု၌ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခြားဖိုရမ်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။
judith rivas ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ငါ command များနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသော mode မှမည်သို့ထွက်ရသလဲ။ မနေ့ကမှစပြီးကျွန်ုပ်၏ Macpro ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့်အသက်သွင်းထားသော်လည်းစတင်ခြင်းကိုမပြီးပါ။ တိုးတက်မှုဘားသည်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူပြီး၎င်းကိုဖြည့်ပါက၎င်းသည်ထိုထက်မကပါ။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်လိုသော်လည်းလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတွင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။ သူကလုံခြုံ mode ကိုဘိုအယူအဆ၌ကျန်ရစ်ခဲ့သည်လိုပဲ။
Judith Rivas ကိုပြန်ပြောပါ
Apple က OS X 10.10.5 Public Beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
သင်၏ Mac mini ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် update လုပ်ပါ